Zononoka decorations Rings
Kugara chikamu mhete
Ndezvipi zvakanakira ari kwakavharwa nenyama zononoka ukaramba rin'i zvichienzaniswa tsikwa ukaramba rin'i?
No pakakoromoka -360 dhigirii chipingamupinyi pamusoro;
A lug pasina kupindira pamwe anotsigira zvinoriumba izvozvo;
The coiled kwacho hakuiti tsvina zvinhu, saka inogona zvoupfumi zvinoberekwa Stainless simbi;
Custom-akaita patani uchishandisa vasiri muforoma mutengo kwacho;
Easy chokugadza dismantling.
Unogona OEM kana ODM?
Hongu, tine simba dzichiri chikwata. The zvinogona kuitwa maererano kwenyu chikumbiro.